China Textile Machine wingkwa Akwa Machine Embroidery Machine Ngwa ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Xuanyi
Powder metallurgy metụtara ụlọ ọrụ na-tumadi na ọdabara na akpakanamde ụlọ ọrụ, akụrụngwa n'ichepụta, metal ụlọ ọrụ, aerospace, agha ụlọ ọrụ, instrumentation, ngwaike ngwaọrụ, electronic ụlọ ngwa na ndị ọzọ ubi nke akụkụ ahụ mapụtara mmepụta na nnyocha, metụtara ngwaọrụ, inyeaka ihe mmepụta, niile ụdị ngwa ọrụ nkwadebe ntụ ntụ, imepụta ngwa ọrụ na-arụpụta ihe.Products gụnyere biarin, gia, carbide cutting tools, ịnwụ, ngwaahịa esemokwu na ihe ndị ọzọ. Na ụlọ ọrụ ndị agha, ngwa ọgụ dị egwu yana akụrụngwa, dị ka egbe agha, ụgbọ ala, ụgbọ elu na tankị na ọzọ breeki abụọ mkpa ka a ga-emepụta site na ntụ metallurgy technology.In na-adịbeghị anya, P / M akpaaka akụkụ aghọwo ndị kasị ibu ahịa maka P / M ụlọ ọrụ na China. Ihe dị ka 50% nke akụkụ akpaaka bụ akụkụ P / M.
(1) Ngwa: (ụgbọala, ọgba tum tum, textile ígwè, ụlọ ọrụ ịkwa akwa igwe, ngwaọrụ ike, akụrụngwa akụrụngwa. Ngwaọrụ eletriki, igwe ihe eji eme ihe, wdg) akụkụ niile nke ntụ ntụ (isi ọla kọpa).
(2) nhazi ọkwa: ihe eji eme uzuzu uzuzu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo, na ihe ndi ozo nke ihe ndi ozo na ihe ndi ozo.
Site na ụgbọala, akụkụ moto ọgba tum tum n'akụkụ akụkụ niile nke metallurgy gụrụ maka ịrị elu nke ịrị elu. Ou nwere ike ịhụ nke ahụ.Powder metallurgical gear bụ na mmepe ngwa ngwa na mpaghara ntụ ntụ ọlaọcha niile .Ọ bụrụ na ọ bụ dịka njirimara nke akụkụ iji kewaa.Gear bụ nke akụkụ ihe owuwu.Ọdịdị zuru oke nke akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ niile nke ígwè dị ukwuu karịa nke akụkụ ndị ọzọ.Ọdịiche dị iche iche na mmepụta nke ngwongwo ntụ ntụ na-abawanye kwa ụbọchị, na ngwa ha na-agbasa. na-ebuwanye ibu.
Nke a bụ n'ihi: 1) mgbe gia nwere akụkụ na-adịghị agbanwe agbanwe, arụ ọrụ, mgbatị ma ọ bụ olulu: mgbe gia nwere oghere na-ezighi ezi, ụzọ ụzọ, akụkụ dị larịị, oghere, oghere nwere oghere, oghere taper; Mgbe gia nwere protrusions, grooves, blind Oghere na olulu nke omimi di omimi di iche na uzo axial.Powder metallurgy usoro di mfe imeputa ma choro obere ma obu ihe nhazi. acrụ ọrụ na imepụta ihe na ihe nkedo na ihe na-arụ ọrụ.Mgbe ụgbọ ala na-agba gburugburu gburugburu gburugburu otu ma ọ bụ ihu ihu abụọ, ihu igwe na-adịghị ike, ụzọ ụzọ, ihe na-eme mkpọtụ, imebi ego, ọgwụgwọ okpomọkụ, iwe iwe na usoro iri ndị ọzọ.N'ihi ya, mgbe a na-eji usoro ntụ ntụ eme ihe maka ịmepụta. Ọnụ ego ion na-ebelata nke ukwuu. 2) mgbe ị na-eme ngwa ngwa site na usoro metallurgy ntụ ntụ. ratedị ihe eji eji ihe eji arụ ọrụ nwere ike iru ihe karịrị 95% .Nke a bụ n'ihi: . Enwere ike ihichapu ma jiri ya mee ihe ọzọ. Nke a agaghị ekwe omume mgbe arụ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ. 3) Nweghachi nke ntụ ntụ metallurgy dị ezigbo mma.N'ihi ntụ ntụ ahụ; A na-emepụta ngwa ngwa Taijin site na ịpị ebu. N'okpuru ọnọdụ eji ya eme ihe, ihe ebu nwere ike ịpị ọtụtụ iri puku ihe ruru narị narị puku ihe eji eme ihe
6. Izizi nke nkesa ihe.Powder metallurgy usoro nwere ike hụ na izi ezi na ịdị n'otu nke ihe mejupụtara hà.
Nke gara aga: Ntụ ntụ Metallurgy Gear
Osote: Mgbapụta Mmanụ